सय वर्षसम्म बाँच्ने दुर्लभ जीव, जो सात वर्षदेखि अहिले सम्म हल्लिएको पनि छैन. – Khabar PatrikaNp
सय वर्षसम्म बाँच्ने दुर्लभ जीव, जो सात वर्षदेखि अहिले सम्म हल्लिएको पनि छैन.
August 11, 2020 166
एजेन्सी। दक्षिण पूर्व युरोपको देश बोस्निाया र हर्जेगोविनामा पानीभित्र भएका ५ गुफामध्ये एकमा एक दुर्लभ स्यालामेन्डरभेटिएको छ । यो पछिल्लो २ हजार ५ सय ६९ दिन (७ वर्ष भन्दा बढी) समयदेखि हल्लिएको पनि छैन ।
वैज्ञानिकले लामो समयसम्म निगारानी गरेपछि उक्त जीव ओल्म्स नामको उभयचर स्यालामेन्डर भएको पत्ता लागेको छ । आँखा नदेख्ने उक्त जीवले आफ्नो सय वर्ष पानीभित्रै बिताउने बताइएको छ । यो जीव स्लोवेनियादेखि क्रोएशियाजस्ता देशमा पनि पाइन्छ । ओल्म्सले करिब १२.५ वर्षमा एकपटक सम्भोगका लागि मात्रै आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्ने वैज्ञानिकले बताएका छन् ।
मानिसको शरीर जब स्वस्थ हुन्छ तब उसको शरीरमा भिटामिन, खनिज र प्रोटिन लगायत अन्य पोषक तत्त्वहरूको आवश्यक मात्रामा भरिपूर्ण हुन्छ । यस्ता पोषक तत्वहरुले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासमेतलाई वृद्धि गर्छ । अनुसन्धानहरुका अनुसार ’भिटामिन डीले सार्स, कोभिड(१९ जस्ता रोगहरुबाट हुने जोखिम पनि कम गर्दछ। यस सन्दर्भमा, भिटामिन डी शरीरको लागि धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ।
Prevआफूले चलाएको मोबाइल कसको नाममा छ, यस्तो छ थाहा पाउँने तरिका….पुरा पढ्नुहोस
Nextमुकुन्द घिमिरेको विवाहको व्यापक चर्चा …..
झापा सुरूँगामा फेरी श्रीमानलाई गरे, बं’चरोले का’टेर ह’त्या,श्रीमतिको रू’वाबासी…-[भिडियो हेर्नुहोस]